Goobaha Waxbarashadda Soomaaliya oo la xiray | KEYDMEDIA ONLINE
Go'aankan kasoo baxay Gollaha Wasiiradda ayaa yimid kadib markii uu laba-kacleeyay COVID-19.
MUQDISHO, Soomaaliya - Waxay Xukuumadda Soomaaliya soo saartay go'aan mudo labo Todobaad lagu xirayo Iskuuladda iyo Jaamacadaha dalka si loo yareeyo faafista COVID-19, oo hadda soo laba-kacleeyay.
Dad aa du badan ayaa maalin walba Soomaaliya ugu dhimanaya cudurka, iyadoo Isbitaalkii ugu waynaa ee loogu tala-galay in lagu daaweeyo bukaanadda uu ka dhamaatay Oxygen, taasoo khatar gelisay bulshadda.
Soomaaliya kama jirto dowladda awood u leh inay dadka ka wacyigeliso, islamarkaana xakameyso isdhexgalka bulshadda oo sida muuqata aan waxba iskabedelin kahor cudurka inta uusan dalka soo gaarin iyo hadda oo COVID-19 jiro.
Si caadi ah ayay dadka u ganacsanayaan suuqayada aad bay u camiran yihiin, gaadiidka dadweynaha ee BL-ka waa la isla raacaa iyadoo aysan dadka xirneyn waji-xirka Face-Mask, taasoo sare u qaadey kiisaska cudurka ee maalin walba la helayo.
COVID-19 waxaa dhaliya Virus halis ah oo dadka isagu gudbo, iyadoo uu ku faafiyo si xowli ah, hadii aan qofka qaba la karan-tiilin, kuwa caafimaadka qabana guryahooda lagu celin, lana ilaalin kala fogaanshaha waxaa adag in cudurka khatartiisa la yareeyo.
Garoonka diyaaradaha Muqdisho maalin walba dadka ka yimaada dibadda way kasoo degaan iyagoo la baarin, mana jiin taxadir la sameynayo, waxaana la sheegay in kiisaska cusub ay yihiin kuwa Soomaaliya soo geliyeen dad ka yimid UK iyo South Africa oo Second wave ka jiro.
Illaa hadda dadka la xaqiijiyay inay COVID-19 ugu dhintay Soomaaliya waxay gaarayaan 208, waxaana uu ku dhacay 6,246, waxayna dadkan badankood yihiin reer Muqdisho, maadaama magaaladda tahay meesha laga soo galo dalka.